Mosquée 67ha: Famaranana ny volana Ramadany
jeudi, 06 juin 2019 15:43
Tonga nanatrika ny lanonam-pamaranana ny volana Ramadany na ny «Aïd Moubarak» teny amin'ny Mosquée 67ha - Antananarivo ny Filohan'ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao omaly alarobia 5 jona 2019. Lanonana izay niarahana tamin'ireo olo-manankaja maro ao amin'ny fikambanan'ny mpino silamo eto Madagasikara izay notarihan'ny Chek Mohamad Filohan'ny fikambanana sy Papa Soulé Filohan'ny fikambanan'ny Zanaka Avaratra.
Niarahaba ny mpino silamo rehetra nahavita ny fifehezan-tena sy ny fifadiana izay zava-dehibe tokoa ho azy ireo i Chek Mohamad satria fandresena lehibe izany. Nisaotra sy nirary soa ny Filohan'ny Antenimieran-doholona amin'ny fanohanany ny antso sy ny fiarahany amin'ny "Communauté Musulmane" hatramin’izay ihany koa na dia teo aza ny tsy fitoviam-pinoana.
Nambaran’i Rivo Rakotovao kosa tetsy andaniny fa na Kristianina aza izy dia tsy sakana ho azy ny zavatra tahaka izao satria ny firaisankina no tokony atao vaindohan-draharaha sy zava-dehibe eo amin’ny fiaraha-monina ary Andriamanitra tokana ihany fa ny fomba fanompoana azy no samihafa. Nambarany koa fa na inona na inona tsy fitoviana eo amin'ny tsirairay dia ny finoana no isan'ny fitaovana entina mampiray hina ny rehetra ka tokony ho hajaina izany.
Nisy ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an'i Papa Soulé izay rain'ny kamboty sy mpikarakara ny sahirana eo anivon'ny mpino silamo eto Madagasikara ary nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo sy korana ny lanonana.